အိုင်လွယ်ပန်: “ နာကျင်မှုအမြင်တွေနဲ့ပဲ ကြာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို ခပ်ကြာကြာပြောနေမိတာ ကြာပြီ “
Posted by အိုင်လွယ်ပန် at 11:04 PM
နာကျင်မှုတွေကို မကြည့်မိတာ ကြာပြီ။
ပြောနေကြတဲ့ အတိုင်းဆို အပ်တစ်စင်းနဲ့ နောက်အပ်တစ်စင်းတိုးတိုက်မိတာ တကယ့်ကို ကိစ္စများလှပေတယ်။
အမြင် တွေရဲ့တိမ်းစောင်းမှုအကြောင်းကို တွေးမိရင် မှန်ဘီလူးတစ်လက်ကို ပြောင်းပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။
နာကျင်မှုဆိုတာဟာလည်း ခင်ဗျားရဲ့ခံစားလိုက်တဲ့ အမြင်တစ်ခုက ထွက်ပေါ်လာနိုင်ရဲ့။
အနီးအဝေးဆိုတာ အကြွေစေ့တစ်စေ့ရဲ့ ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပါပဲ။ ခင်ဗျားက ဘာကို ဘယ်လိုကြည့်မိလိုက်တာလဲ။
နာကျင်စရာရှိရင် နာကျင်ပါ ။ လွတ်လပ်စွာ နာကျင်ပါ ။ ပြောရရင် ….
အဆိုအမိန့်တစ်ချို့ဟာ နာကျင်မှုထဲက ထွက်ပေါ်ကောင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမယ်။
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားရဲ့ နာကျင်မှုသက်သက်အတွက်ဆိုရင် အဆိုအမိန့်တွေကို ဖင်ခုထိုင်မနေပါနဲ့ ။
နာကျင်ပါ တစ်ကိုယ်ရည် တစ်ကာယ လွတ်လပ်စွာနာကျင်ပါ ။ နာကျင်ခြင်းကိုလည်း နာကျင်ခြင်းအလျှောက်
တန်ဖိုးထားပါ။ကိုယ့်နာကျင်မှုအတွက် ကိုယ့်ရင်ထဲကစကားဆိုတာ ကမ္ဘာကျော်ကျော်မကျော်ကျော် ရှိကိုရှိပြီးသားပါ။
ကိုယ့်နာကျင်မှုအတွက် သူများနာကျင်မှုကို ခုတုံးလုပ်ရတာ တကယ်တမ်းနာကျင်တတ်ရင် ပိုနာကျင်ဖို့ကောင်းလှတယ်။
********************************************************************** ********************************************************************** **********************************************************************
လူတစ်ယောက် စိတ်က တောင်တွေးမြောက်တွေး တွေးနေတယ်။
အဲဒီ့အထိ လူမသိသူမသိ ( သူကိုယ်တိုင်ပါမသိ) အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။
ကဲ ! တစ်ခုဆို တစ်ခုပဲလုပ်ပါ။
တွေးချင်ရင် တွေးပါ တဲ့။
ဂီတနဲ့ အခန်းမီးကို ပိတ်တယ် ။
ဆက်တွေးတယ် ရင်ထဲမှာ ဟာသွားတယ်။
အခန်းမီးနဲ့ အတွေးကို ပိတ်လိုက်တယ် ။ အဆင်မပြေပြန်ဘူး။
ဂီတနဲ့အတွေးကို ထပ်ပိတ်ပြန်တယ်။ ထပ်အဆင်အပြေပြန်ဘူး။
ရှိခဲ့တုန်းက သတိမထားမိတဲ့ အရာတွေ တစ်စုံတစ်ခုကို လစ်ဟာခံရတော့မှ နာကျင်ခြင်းဟာ ပြန်စလာတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ့်ကျမှ တစ်စုံတစ်ခုကို ဆုံးရူံးရတာလဲ ။
အခန်းမီးနဲ့ ဂီတကိုပိတ်ပြီးမှ နာနာကျင်ကျင်ပြန်တွေးတယ်။
နာကျင်စွာတွေးတော့မှ နာကျင်ခြင်းဟာ နာကျင်စွာ ပိုမိုနာကျင်လာတယ်။
ငိုဟယ် ရယ်ဟယ်ဆိုတာ ငိုဟယ်ငိုဟယ် မဟုတ်တာ သေချာသလောက်ပဲ။
ရယ်ဟယ်ရယ်ဟယ် မဟုတ်တာလည်း သေချာသလောက်ပဲ။
ထပ်ပြောရရင် သေချာခြင်းကိုယ်တိုင်ကလည်း မရေရာ/မသေချာတာ သေချာသလောက်ပဲ။
ကဲ ! ယခုအချိန်မှစတင်၍ အားလုံးကိုပြန်လည်ကာ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီတဲ့။
အားလုံးကို ပြန်လည်လက်ခံရရှိလိုက်ပေမယ့် ဂီတကိုဖွင့် မီးကိုဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းတစ်ခုထဲ
တွေးနေသူရဲ့ နာကျင်ခြင်းဟာတော်တော်နဲ့ အသားမတက်နိုင်တော့ဘူး ။
ပြန်ရလာပေမယ့်လည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးခြင်းဟာ ပြန်ပြောလို့ကောင်းမွန်ပြီး ခံစားနာကျင်ရတဲ့ ပုံပြင်ကောင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့။
မရှိရှိတာ မီးခွက်ထွန်းရှာရှာနေရတဲ့ နာကျင်မှုဟာ သမားရိုးကျ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုရဲ့စနက် ဒါမှမဟုတ် …
များပြားလှစွာသော ဒါမှမဟုတ် ……. ။
ပြောချင်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းက အဲသလိုပြီးဆုံးသွားတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ပြန်စိုက်ပစ်နေမိတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင် ဓါးတစ်လက် ဟာ အဲဒါပါပဲ ။
ငါဟာ ငါ့ခံစားမှုကို မှန်ဘီလူးတစ်လက်ဆိုတဲ့ အမြင်ထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။
ငါဟာ မှန်ဘီလူးတစ်လက်ကို ပြောင်းပြန်ကြည့်မိနေသူ။
ငါ့ရဲ့ နီးစပ်စေလိုခြင်းတွေကို ငါ့ကိုယ်တိုင်အမြင်နဲ့ပဲ ပြန်ပြန်ဝေးစေကာ နာကျင်နေသူ ။
ကြာပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြောမိနေတာ ကြာပြီ။
ကိုအိုင်လွယ်ပန်ကဗျာတွေကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တည်းက စွဲစွဲမြဲမြဲဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ အကြိုက်ဆုံးကဗျာဆရာက ဘယ်သူလဲဆိုရင် အိုင်လွယ်ပန်နဲ့တိုးနှောင်မိုး လို့ဖြေမိတယ်။ အရင်ကလည်းကြိုက်တယ် အခုလည်းကြိုက်နေတုန်း.. ဘလော့လေးကိုပစ်မထားပါနဲ့ဗျာ..။
Ei Mon Khine said...
တစ်ရက်ထဲမှ ၂၄ နာရီကိုနှုတ်ပါ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသား၊ ငါး ရွေးသလို
အဆမတန် မျက်လုံးတွေ ပြူးကုန်ကြမလား
ဟာ ခနဲ ဟာ ကုန်ကြမလား
ဒလဟော စီးဆင်းမှုကို ရပ်တန့်သွားနိုင်အောင်
လောကထဲ မှ လူတစ်ယောက်ကိုလဲ
ခမ်းခမ်းနားနား ကျွန်တော်တွင် ဘာမှမရှိပါ ။
သေချာပြီဆိုတဲ့ နေ့မှကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းခေါ်ပါ (သို့)
သင့်ရဲ့ လက်ဆတ်တဲ့ အပြုံးတစ်ပွင့်မှာ
တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုတွေ ပေကျံနေပါစေ ။
မျက်ရည်တွေ မရှိတော့တဲ့ နေ့အထိ
ကျွန်တော် အသက်ရှိနေချင်သည် ။ ။
ကောင်းကင်မှာ လမင်း မြေပြင်မှာစမ်းရေ
အိုင်လွယ်ပန် Design by Insight © 2009